Suuqgeyntaadu ma waxay ka cabaneysaa kala-jajab, niyad jab iyo abaabul la'aan? | Martech Zone
Waxaad u badan tahay inaad ku jawaabtay haa… kuwayaguna waa caqabad sidoo kale. Urur la’aan, kala qaybsanaan iyo niyad jab waa mawduucyada muhiimka ah ee ka soo baxa natiijooyinka Sahanka Suuqgeynta iyo Teknolojiyada ee Isku-tallaalka, oo ay sii daayeen signal (hore BrightTag). Natiijooyinka daraasaddu waxay muujinayaan xaqiiqda ah in suuqleydu ay inta badan Ha dareemin in tiknoolajiyada xayeysiintu ay ka caawinayso inay ku guuleystaan ​​suuq geynta marinka marinka bilaa-xadka in macaamiisha ay ka rajeynayaan noocyada maanta.
signal sahamisay 281 summad iyo suuqleyda hay'adda, oo fidsan 16 toosan oo warshado ah, oo ka kala socda adduunka oo dhan si loo sahamiyo caqabadaha ay la kulmaan suuqleydu si ay u gaaraan himilooyinkooda suuq-geynta suuq-geynta.
Natiijooyinka Muhiimka ah ee Sahanka Suuqgeynta iyo Tiknoolajiyadda
1kiiba 2 suuqleyda ah ayaa soo sheegaya teknoolojiyada kala-go'day ayaa caqabad ku ah awooddooda si loogu abuuro khibrad isdaba joog ah macaamiisha ku baahsan webka, mobilada iyo kanaalada kale
9kiiba 10 ayaa aaminsan isku xirka aaladaha kala geddisan iyo teknolojiyadda ayaa horumarin lahaa awooddooda wax soosaarka, shakhsiyeynta macaamilka macaamilka, dirista farriimaha waqtiga ku habboon, kobcinta daacadnimada, qiimeynta ololayaasha, iyo kordhinta ROI
51% dadka suuqleyda ah waxay yiraahdaan weli ma dhexgalaan tiknoolajiyada suuqgeynta ka baxsan heerka ugu aasaasiga ah
In ka yar 1 ka mid ah 20 suuqleyda ayaa soo sheegay inay haystaan ​​tiknoolojiyad isku dhafan oo dhammaystiran
62% waxay aaminsan yihiin in qalabka ku jira tiknoolajiyadooda ay yihiin aan la isticmaalin
Kaliya 9% suuqleyda ayaa rumeysan taas farsamada ayaa ah xoogooda
Mid cusub ayaan sii deynayaa SuuqaClips fiidiyow goor dhow ku saabsan talada aan siinayno macaamiisha oo ka duwan la-tashigii aan bixin jirnay sanado ka hor. Asalka ayey u tahay, fursada aad ku dhisi kartid taada oo aad ula jaanqaadi karto aaladaha waxay noqoneysaa ikhtiyaar la awoodi karo oo loogu talagalay dhexdhexaadka ilaa shirkad weyn.
Badanaa, qalabka miiska lagu iibiyo oo dhan ma bixiyaan qanacsanaanta, waxtarka, iyo qaab-dhismeedka lagama maarmaanka u ah in lagu habeeyo ilahaaga gudaha iyo howlahaaga.
Hubso inaad gujiso oo aad aqriso warbixinta oo dhan - Sahaminta Suuqgeynta iyo Isgaarsiinta Teknolojiyada!
Tags: dhalaalayasuuqgeynta kanaalkaNiyad JabqaybsanaantadhexgalkaJoe Stanhopeqanacsanaanta suuqasahaminta suuq geyntatikniyoolajiyadda suuqgeyntaqanacsanaantasignalka